नेपाल शरीरमा मुसा छ, झुक्किएर पनि नगर्नोस् यस्ता काम
Nepal Online Patrika| Kathmandu: शरीरमा मुसा आउनुले पनि आममानिस समस्या परिरहेका छन् ।
कसैकसैमा त लामो समय देखिको मुसाले हात, खुट्टा नै कुरूप पनि बनाएको हुन्छ । मेडिकल भाषामा “वार्ट” भनिने मुसा अरु केहि नभएर छालामा हुने एक किसिमको भाइरसको संक्रमण मात्र हो ।
शरीरमा आउने मुसाका कारण मानिसहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कतिपयलाई त मुसाका कारण शरीरका अंगहरु छोप्न पर्ने अवस्था समेत आउने गरेको छ ।
अनुहार, आँखीभौँ, आँखाको परेला, नाकको टुप्पो, हात, खुट्टामा समेत मुसा आइदिन्छ । जसले मानिसलाई कुरूप नै पनि बनाउँछ । यद्यपि, चिकित्सा विज्ञानले यसलाई छालारोग ठान्दछ ।
शरीरमा मुसा आउनुको मुख्य कारण ह्युमन पेपिलोमा नामक भाइरस हो । यस्तो भाइरसले स–साना, खस्रो, कडा खालको दर्दरहित दानाजस्ता मुसा उत्पादन गर्छ ।
केही मुसा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पनि फैलने गर्छ । मुसा तोरीदेखि अंगुरको दानासम्मको आकारमा हुन्छ ।
यस्तो मुसा शरीरको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भने सर्दैन । सामान्यतया शरीरमा देखिने मुसा काला, खैरा, सेता, राता रङका हुन्छन् ।
झुक्किएर पनि नगर्नोस् यस्ता काम
शरीरमा भएको मुसाबाट रगत आएमा, मुसा भएको ठाउँ निरन्तर चिलाएमा र दुख्यो भने चिकित्सककहाँ जानुपर्छ । यस्तो लक्षणले क्यान्सरसमेत हुन सक्छ ।
१. कतिपयले घरमै वा पार्लर पुगेर मुसा हटाउने गर्छन् । जुन गलत हो ।
२. मुसाले अनावश्यक दुःख दिएको छैन भने त्यसलाई छोइरहनु हुँदैन । यदि मुसा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएमा चिकित्सकबाट लेजरको प्रयोग गरी हटाउनुपर्छ ।
स्वस्थ मानिसमा करिव ३० प्रतिशत मुसा ६ महिनामा र ६० प्रतिशत एक वर्षमा आफै हराएर जान्छ । यदि मुसा सानो हुँदै गएमा र रगतका शिराका काला धब्बाहरु देखिएमा यो आफै हराएर जान् ।